Qaraxyo ka dhacay Baqdaad - BBC Somali - Warar
Qaraxyo ka dhacay Baqdaad
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 27 Oktoobar, 2013, 10:40 GMT 13:40 SGA
Suuqyada Ciraaq ayaa lala beegsadaa qaraxyada iyo meelaha dadka ay ku badan yihiin.
Qaraxyo Bombaano oo ka dhacay magaalo madaxda Ciraaq ee Baqdaad ayaa dilay ugu yaraan soddon iyo siddeed qof, waxuuna dhaawacay in ka badan boqol qof.
Boliiska ayaa sheegay in qaraxyada ay ku qarxeen xaafad Shiicada waqtiyo isku dhow. Meelaha qaraxa lala beegsaday waxaa ka mid ah suuq aad loo buuxo iyo saldhig baska laga raaco.
Qaraxyada ka dhaca Ciraaq ayaa gaaray heerkii ugu xumaa mudo shan sano ah.
Wariyaha BBC ee Baqdaad, ayaa sheegay in ilaa afar boqol oo qof la dilay bishan. Wuxuu sheegay weerarka in lala beegsaday dadka Shiicada iyo Sunniga laga tirada badan yahay, taasoo keentay cabsi in lagu noqdo dagaal madhab ku salaysan.